PSJTV | अनुष्का पुगिन् शीर्ष ४० मा
बुधबार, २५ मङि्सर २०७६ पिएसजे न्युज
काठमाडौं : मिस नेपाल वल्र्ड अनुष्का श्रेष्ठले लण्डनमा आयोजित मिस वर्ल्ड २०१९ को ६९ औं संस्करणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन् । अनुष्काले दोस्रो चरणको ‘हेड टु हेड च्यालेन्ज’ प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्दै मिस वर्ल्डको शीर्ष ४० मा पुगेकी छिन् ।
मंगलबार भएको हेड टु हेड च्यालेन्जमा अनुष्काले इन्डोनेसियाकी प्रतिस्पर्धी फ्रेड्रिक एलेक्सीस कलसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।
अनुष्कासँगै अन्य १० देशका सुन्दरीले हेड टु हेड च्यालेन्ज जितेका छन् जसमा मोल्डोभा, भेनेजुएला, नाइजेरिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स, गुयाना, भारत, ट्रिनिड्याड एण्ड तोबागो र प्याराग्वे रहेका छन् ।
मिस वर्ल्डको फाइनल यही डिसेम्बर १४ तारिखका दिन हुँदैछ ।
गायिका आस्था राउतलाई एक वर्ष कैद हुनसक्ने, के भन्छन् सुरक्षा कानुनका जानकार?
आस्था राउतलाई सुझाव दिँदै दिपकराज गिरीले लेखे यस्तो स्टाट्स
सेक्स साइकोलोजीमाथि बनेको ‘चपली हाइट ३’ मा कस्तो छ स्वस्तिमाको भूमिका?
आलम धराैटीमा छुटे पनि लगत्तै पक्राउ पर्ने
राजदूतलाई देउवाले भनेः अतिक्रमण अस्विकार्य
काठमाडौं उपत्यकामा घरधनीले डेरामा बस्नेको विवरण प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रहरीले यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। चिनियाँहरू काठमाडौंमा ...
केही दिनअघि आफ्नो विवाहको नक्कली निमन्त्रणा पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै आलिया भट्ट र रणवीर कपुर विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। दुवैको पारिवारिक सूत्रका अनुसार उनीहरूबीच नोभेम्बरको पहिलो साता विवाह हुन ...